Mofo baolina - Fomba tsotra fikarakarana mofo baolina
par Gaël RAKOTOVAO	 25 juillet 2015
Fomba fanamboarana mofo baolina izay azo atao gouter hoan’ny ankizy na koa hoanina miaraka amin’ny dité na café atao sakafo maraina.
Isan’ny olona: 3 na 4
Fotoana hikarakarana azy : 15mn
Fotoana hiketrehana azy: 15mn + 4h repos
Karibonetra (bicarbonate de soude izay hita any amin’ny pharmacie): 1/2 sotrokely
La farine 1/2kg
Levure 01 sotrokely
Siramamy 01 kapoaka
Ronono 1/2 vera
Fomba fikarakaraina Mofo baolina
Kapohina tsara miaraka ny siramamy, atody, ary karibonetra.
Rehefa levona tsara ireo atapoka ny ronono.
Ampifangaroina tsarany la farine sy ny levura dia araraka tsikelikely. Haroina tsy mijanona ka tsy atao miverina rehefa tsy manara-tanana raha raisina dia vita.
Saromana tsara amin’ny lovia, dia avela hilona mandritra ny 04 ora fara fahakely ny koba. Ny tena tsara dia avela hilona mandritra ny alina iray.
Raisina amin’ny sotro, dia arotsaka anaty menaka tsy dia mangotraka loatra.
la pâte à beignets, mofo gasy, pâte a beignets, pâtisserie malgache, viennoiserie malgache
Article précédent : Charlotte patissière au chocolat
Tourisme de croisière : Taolagnaro dans sa phase de décollageArticle suivant :